Mateo 15:10-39 NA-TWI | Biblica
Mateo 15:10-39 NA-TWI
Afei, Yesu frɛɛ nnipadɔm no ka kyerɛɛ wɔn se, “Muntie nea meka no na mommɔ mmɔden nte ase. Ɛnyɛ ade a ɛbɛkɔ onipa mu no na ɛmma ne ho ntew, na mmom nea ebefi ne mu aba no na egu ne ho fi.”
Nsɛm a Yesu kae yi maa n’asuafo no ba bɛka kyerɛɛ no se, “Wunim sɛ wo nsɛm a wokae no ama Farisifo no bo afuw?’ “
Yesu buaa wɔn se, “Dua biara a ɛnyɛ m’agya na oduae no, wobetu akyene. Mummmua wɔn koraa. Na wɔyɛ anifuraefo a wɔrekyerɛ anifuraefo kwan nti, wɔn nyinaa bɛkɔ akɔtew ahwe amoa mu.”
Petro ka kyerɛɛ Yesu se, “Kyerɛ yɛn bɛ no ase.”
Yesu nso bisaa no se, “Ampa ara sɛ monte ase? Munnim sɛ ade a ɛfa onipa anom no fa onipadua no mu, na asan aba bio? Asɛm a ɛho ntew biara fi koma a emu ntew mu ma egu nea ɔkaa saa asɛm no ho fi. Koma mu na adwemmɔne, awudi, ayerefasɛm, aguamammɔ, korɔn, atoro ne ntwatoso fi. Eyinom na egu onipa ho fi, nanso sɛ obi anhohoro ne nsa, sɛnea mo amanne te no, na odidi a, ne ho nguu fi honhom mu.”
Ɔbea bi gyidi
Yesu fii ɔman no mu hɔ kɔɔ Tiro ne Sidon. Kanani bea bi a ɔte ɔman no mu hɔ de osu baa Yesu nkyɛn bɛkae se, “Awurade, Dawid Ba, hu me mmɔbɔ! Honhommɔne hyɛ me ba mu na sɛ ɛka ne ho a, ɛma ne ho yeraw no.”
Yesu anka hwee. N’asuafo no hyɛɛ no sɛ, ɔmpam ɔbea no mfi hɔ. Wotii mu ka kyerɛɛ no bio se, “Ka kyerɛ no na omfi ha nkɔ na ɔde n’adesrɛ no retuatua yɛn aso.”
Yesu ka kyerɛɛ ɔbea no se, “Wɔsomaa me sɛ memmɛboa Yudafo, Israel nguan a wɔayera no, na ɛnyɛ Amanamanmufo.”
Ɔba bɛkotow no kɔɔ so srɛɛ no se, “Me wura, boa me!”
Yesu ka kyerɛɛ no se, “Enye sɛ wobegye abodoo afi mmofra nsam atow ama akraman.”
Ɔbea no nso buae se, “Ɛwom saa de, nanso akraman no nso tumi di mporoporowa a efi wɔn wura no pon so gu fam no.”
Yesu ka kyerɛɛ ɔbea no se, “Maame, wo gyidi mu yɛ den. Mɛyɛ w’abisade no ama wo.” Ɛhɔ ara, ne babea no ho tɔɔ no.
Yesu san baa Galilea po no ho. Ɔforo kɔtenaa bepɔw bi so. Nnipa bebree de mpakye, anifuraefo, apirafo, mumu ne wɔn a wɔyare nyarewa ahorow baa ne nkyɛn sɛ ɔnsa wɔn yare ma ɔsaa wɔn nyinaa yare. Anwonwasɛm bɛn ni! Wɔn a wɔnkasae da kasae; wɔn a wɔn nsa ne wɔn nan atwitwa nyaa nan ne nsa foforo; abubuafo nantewee, huruhuruwii, na anifuraefo huu ade. Nnipadɔm no ho dwiriw wɔn ma wɔkamfoo Israel Nyankopɔn.
Nnipa mpemnan aduanma
Afei, Yesu frɛɛ n’asuafo no nyinaa baa ne nkyɛn ka kyerɛɛ wɔn se, “Nnipa yi yɛ me mmɔbɔ. Wɔabedi me nkyɛn ha nnansa. Aduan a ɛwɔ ha nyinaa nso asa. Nanso, mempɛ sɛ mema wɔkɔ wɔn afi mu a wonnidii, anyɛ saa a, wɔbɛtotɔ berɛw wɔ kwan so.”
N’asuafo no nso bisaa no se, “Sare so ha de, ɛhe na yebenya nnipadɔm yi ano aduan?”
Yesu nso bisaa wɔn se, “Abodoo dodow ahe na mowɔ?’ Wobuae se, “Yɛwɔ abodoo ason ne mpataa kakraa bi.”
Yesu ka kyerɛɛ nnipadɔm no ma wɔn nyinaa tenatenaa ase wɔ sare no so. Afei, ɔfaa abodoo ason no ne mpataa no hyiraa so, na obubuu mu de maa asuafo no sɛ wɔmfa mma nnipadɔm no nni. Wɔn nyinaa dii aduan no mee pintinn. Wɔn a wodii saa aduan no, na wɔn dodow yɛ nnipa mpemnan a wɔankan mmea ne mmofra anka ho. Wodidi wiei no, akyiri mporoporowa a wɔtasee no yɛɛ nkɛntɛmma ason.
Eyi akyi, Yesu gyaa nkurɔfo no kwan maa ɔno nso kɔtenaa ɔkorow mu twa kɔɔ Magadan.
Read More of Mateo 15